BERE bi na Dutch supɔw Saba yɛ guankɔbea ma po so akorɔnfo a wokyinkyin Caribbean Po so de hwehwɛɛ nneɛma a wobewia no. Ɛnnɛ, nnipa bɛyɛ 1,600, a wɔn mu 5 yɛ Yehowa Adansefo na wɔte supɔw ketewaa yi a ɛwɔ kilomita 240 wɔ Puerto Rico apuei fam no so. Nanso, asomfo akokodurufo yi rehwehwɛ biribi a ɛsom bo kɛse na ɛnyɛ biribi a wobewia. Wɔde nsiyɛ rehwehwɛ nnipa a ‘wɔpɛ daa nkwa.’—Asomafo no Nnwuma 13:48.
Wodii kan kaa Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no wɔ supɔw no so wɔ June 22, 1952 mu bere a hyɛn Sibia a ɛyɛ mita 18 a Yehowa Adansefo na wɔde yɛ adwuma no kogyinaa Saba mpoano no. (Mateo 24:14) Asɛmpatrɛwfo Gust Maki ne Stanley Carter foroo The Ladder, abo atrapoe 500 anammɔnkwan bi kɔɔ Saba ahenkurow Bottom mu. * Mfehaha pii ni no, na ɔkwan ketewa yi nkutoo na wɔfa so kɔ supɔw no sofo nkyɛn.
Kristofo adansedi adwuma a wɔyɛ wɔ Saba no ho amanneɛbɔ a wodii kan tintimii no puei wɔ 1966 Yearbook of Jehovah’s Witnesses mu. Sɛnea saa amanneɛbɔ no kyerɛ no, na Ɔdansefo biako pɛ na ɔwɔ supɔw no so. Akyiri yi abusua bi a wofi Canada de mfe pii kɔkaa asɛmpa no wɔ hɔ. Nnansa yi ara Russel ne Kathy, awarefo bi a wofi United States a wakɔ pɛnhyɛn kɔɔ Saba na wofii asɛnka adwuma no ase wɔ hɔ. Kenkan wɔn asɛm no.
Me ne me yere de wimhyɛn koduu hɔ na yɛkɔsoɛɛ Ronald a na ɔno nkutoo ne Ɔdansefo a ɔwɔ nsupɔw no so wɔ 1990 mfe no pii mu no. Na ɔretwɛn yɛn wɔ wimhyɛn gyinabea. N’ani gyee adaka ketewaa bi a atosode ayɛ no ma a yɛde kɔkyɛɛ no no ho, efisɛ wɔnnɔw mfuw akɛse wɔ supɔw no so. Afei yɛforoo afiri ketewaa bi de faa Bepɔw Scenery ho kwan a akyeakyea no so brɛoo de kɔɔ ogya bepɔw no atifi.
Yegyinae wɔ Hell’s Gate akuraa no ase, na Ronald kɔhwɛɛ ɛhɔnom amanneɛbɔ pon so hwɛe sɛ ebia Kwasida baguam ɔkasa no ho nsato krataa no da so bɔ hɔ anaa. Yɛn ani gyei bere a yehui sɛ ɛbɔ hɔ no. Ohuruw traa afiri no mu bio, na yɛtoaa so foroo supɔw no kɔɔ Windwardside, akuraa a ɛso sen biara wɔ supɔw no so. Sɛnea saa akuraa fɛfɛ yi din kyerɛ no, ɛwɔ baabi a mframa fi bɔ ba supɔw no so, na ɛwɔ soro sen po bɛyɛ mita 400. Bere a aka kakraa bi ma yɛadu Ron fie no, yehuu nkyerɛwee fɛfɛ bi wɔ abrannaa no anim a ɛkyerɛ sɛ ɛhɔ yɛ Yehowa Adansefo Ahenni Asa.
Bere a yɛredidi awia no, mibisaa asɛm a ɛno nti na yɛkɔɔ hɔ a ɛne sɛ, “Ɛyɛɛ dɛn na wobɛyɛɛ Ahenni ɔdawurubɔfo wɔ Saba?”
Ron buae sɛ: “Bere a wosii Yehowa Adansefo baa dwumadibea a ɛwɔ Puerto Rico no wiei wɔ afe 1993 mu no, me ne me yere ani begyee ho sɛ yɛbɛkɔ so ayɛ yɛn amannɔne adwuma no. Na yɛadi kan ne awarefo akwampaefo bi akɔ Saba pɛn, na saa bere no na yehui sɛ nnipa 1,400 na wɔwɔ hɔ nanso na Adansefo biara nni hɔ. Enti yɛne Puerto Rico Baa Boayikuw no kaa ɛhɔ a yebetu akɔ no ho asɛm.
“Nneɛma kɔɔ so yiye na awiei koraa no wɔpenee so sɛ yentu nkɔ. Awerɛhosɛm ne sɛ mfe abien akyi no, me yere yaree denneennen na yɛsan kɔɔ California. Bere a owui akyi no, mesan baa Saba. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, mepɛ sɛ meyɛ biribiara a mifi ase no wie.”
Afie Afie Adansedi Wɔ Saba
Ron fie a adi mfe ɔha no asa so san yɛ Ahenni Asa. * Bere a yɛredidi anɔpa na yɛasiesie yɛn ho akɔ asɛnka no, osu tɔe ma ɛfɔw mukaase a wonkuruu so no mu. Bere a yedidi wiei no, yɛkɔɔ afie afie asɛnka wɔ Bottom akuraa no ase bere a na osu no retew no. Sɛ yedu ofie biara mu a, Ron bɔ ofiewura no din kyia no. Yɛde adwene sii nsɛm a asisi nnansa yi wɔ hɔ no so wɔ yɛn nkɔmmɔbɔ no mu. Nnipa no mu dodow no ara nim Ron ne asɛnka adwuma a ɔyɛ no, na wɔn mu pii gyee Bible ho nhoma.
Sɛ wunnim akuraa no asefo a, ebetumi ayɛ den sɛ wobɛyɛ wɔn a wɔkyerɛ Ahenni asɛm no ho anigye ho kyerɛwtohɔ. Dɛn ntia? Ron ka sɛ efisɛ “mmara hwehwɛ sɛ wɔde aduru kɔla biako pɛ ka afie no nyinaa ho.” Ɛyɛ nokware efisɛ mehwɛe na mihui sɛ Saba adan nyinaa ho yɛ fitaa na atifi yɛ kɔkɔɔ.
Sɛ yɛne ofiewura no bɔ Bible mu nkɔmmɔ wie a, yɛto nsa frɛ no sɛ ommetie baguam Bible mu ɔkasa a wɔma no Kwasida wɔ Ahenni Asa so no. Sɛ Ron wɔ supɔw no so a, ɔma baguam ɔkasa dapɛn biara. Mprempren ɔyɛ Bible adesua 17 wɔ Saba. Nnipa 20 na wɔkɔɔ Kristo wu Nkaedi no ase wɔ 2004 mu. Ɛwom sɛ wɔnnɔɔso de, nanso wɔyɛ nnipa a wɔwɔ Saba nyinaa no mu ɔha mu nkyem 1!
Nokwarem no, Yehowa Adansefo abɔ mmɔden sɛ wɔbɛka Onyankopɔn nkwagye asɛm no akyerɛ nnipa pii sɛnea wobetumi. Sɛ ɛyɛ supɔw ketewa te sɛ Saba anaasɛ asasepɔn nyinaa no, Yehowa Adansefo de nokwaredi di ahyɛde a ese ‘wɔnkɔyɛ amanaman nyinaa asuafo’ no so.—Mateo 28:19.
Awerɛhosɛm ne sɛ yɛn nsrahwɛ no aba awiei. Bere a yɛtraa yɛn wimhyɛn no mu no, yɛne wɔn dii nkra. Yɛbɛkae yɛn Saba nsrahwɛ no ne bere a yɛforo kɔɔ The Bottom no bere nyinaa!
^ nky. 3 Ɛte sɛ nea po so akorɔmfo na wɔmaa no din The Bottom no, efisɛ na wosusuw sɛ ɛwɔ ogya bepɔw bi ase tokuru bi mu.
^ nky. 12 Wɔ September 28, 2003 mu no, atuhoamafo a wofi Florida, U.S.A., kɔɔ Saba kosiesiee ɔdan bi a seesei wɔde ayɛ Ahenni Asa no.
[Asase mfonini ahorow a ɛwɔ kratafa 10]
Share Share Yɛforo Kɔɔ Saba Kurow Bottom Mu
w05 2/15 kr. 10-11